Hot Pot စားနပ်ရိက္ခာ
Frozen ငါး Ball
Frozen ထားသော TEMPURA
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> Frozen Tofu
Champion Refrigerant Food Co., Ltd. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းခြင်းနှင့်တင်ပို့ဖြစ်ပါသည်, ကျွမ်းကျင်မှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာထက်ပိုမိုအတွက်စက်ရုံတွင် Taiwanမူလကျနော်တို့ကအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များပေးနိုင်ပါသည်ယုံကြည်ပါတယ်များမှာ
အရေးအပါဆုံးနည်းပညာဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနှင့်ဖြေရှင်းချက်ပြည့်စုံသောအထောက်အပံ့နှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှု။ OEM နှင့်နှစ်ဖွဲ့အမိန့်ကြိုဆိုကြသည်။ Company မှန်ထမ်းတစ်ဦးအားကြီးသောအဖွဲ့သည်ဝိညာဉ်ကျွမ်းကျင်စွာရှိသည်, ကျနော်တို့အချိန်မီဝန်ဆောင်မှုမှကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ထိုနေ့သင်တို့၏မေးမြန်းချက် / လိုအပ်ချက်များကိုတုန့်ပြန်ကြသည်။
Frozen Tofu အဘယ်သူမျှမ Generator modified ပဲပိစပ်ပရိုတိန်းကိုသုံးခြင်းဖြင့်မကြာသေးမီကဖန်တီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝကပါဝင်ပစ္စည်းများဖန်ဆင်းသည်, မွှေးကြိုင်, သိပ်သည်းမြင့်မား Nutrition Frozen Tofu ထိုကဲ့သို့သော searing, စွပ်ပြုတ်, နှိုးဆော်-ကြော်နှင့်နက်ရ​​ှိုင်းသော-ကြော်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများအတွက်ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာကြက်ဥအဖြူမဆံ့မခံပါဘူး။ Vegans လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြောင့်ရရှိခံစားနိုင်သည်။ Frozen Tofu မှာတစ်နှစ်အတွက်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာပလပ်စတစ်မပျက်စီးနှင့်မိသားစုများအတွက်ကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်။
FT-2 : Tofu အေး
ကြော်အဘို့အ Frozen Tofu
ကြော်အဘို့အ Frozen Tofu အထူးသဖြင့်ရေနက်ကြော်အဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်သိပ်သည်းဖြစ်ပါတယ်။ နက်ရှိုင်းသော-ကြော်တဲ့အခါ, ပြင်ပမှ crunchy ဖြစ်လိမ့်မည်သို့သော်အတွင်းပိုင်းတွင်ပျော့ပျောင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အေးပါက, အလွန်အမင်းကိုအကျဉ်းချုပ်တင်ဆက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကြော်အဘို့အ Frozen Tofu, platting များအတွက်အထူးသဖြင့်ကောင်းအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကြည့်ရှုသည်။ နက်ရှိုင်းသော-ကြော်ကဆိုရင်, Frozen Tofu ပို. ပင်၎င်း၏အမွှေးအကြိုင်မှနှုတ်ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်။ က၎င်း၏အမွှေးအကြိုင်နှင့်အရသာမြှင့်ပါလိမ့်မယ်ပျော်မွေ့နေစဉ်အချို့ငရုတ်ကောင်းထည့်ပေးသည်။ ကြော်အတွက်ငါတို့ Frozen Tofu ယခုထိုင်ဝမ်ကြော်ကြက်သားရောင်းချသူများအတွက်နံပါတ်တစ်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
စွပ်ပြုတ်ဘို့ Frozen Tofu
အစဉ်အလာထိုင်ဝမ်ဟင်းလျာအတွက်, ရှည်ရှည်စွပ်ပြုတ်ချက်ပြုတ်တစ်ဘုံနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါယေဘုယျအားဖြင့်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ပူအိုးတလုံး, ပဲပိစပ်ဆော့စ်နှင့်အတူစွပ်ပြုတ်အစားအစာနှင့် braised ဝက်သားနမူနာဖြစ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့်စွပ်ပြုတ်ထဲမှာ, ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အရည်ရွှမ်းအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အရသာ, စွပ်ပြုတ်ရဲ့ခံနိုင်ရည်, ထို soakage မှတပါးလည်းဝယ်များအတွက်အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အထူးသဖြင့်စွပ်ပြုတ်သောကြောင့်, စွပ်ပြုတ်ဘို့ Frozen Tofu ထုတ်လုပ်ရန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာစွပ်ပြုတ်အတွက်အရသာဟင်းရည်စဉ်ကိုစုပ်ယူနိုင်ပြီး, ဆဲ၎င်း၏ texture ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးအတွက်, စွပ်ပြုတ်ဘို့ Frozen Tofu ကျိန်းသေချက်ပြုတ်အတွက်ကောင်းတစ်ဦးဖြည့်စွက်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
FT-4 : Tofu Freeze
ယနေ့ခေတ်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူများစွာလောကလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာသည်သောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး, Eco-friendly, သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အကြောင်းရင်းများ, အဘို့အသက်သတ်လွတ်စားဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်။ ထိုင်ဝမ်အတွက်, သူတို့ရဲ့ဘာသာတရားကိုထဲက, လူတချို့ကိုတင်းကြပ်စွာ vegans ဖြစ်ကြ၏။ ထိုင်ဝမ်အတွက်အစဉ်အလာကအေးခဲ tofu များသောအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်များလျှော့ချရန်နှင့်၎င်း၏သားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြက်ဥအဖြူပါရှိသည်။ အစားအစာတံဆိပ်ကပ်ခြင်းအပြည့်အဝစံချိန်စံညွှန်းမီမဟုတ်ခဲ့ချိန်တွင်ထို ovo-သက်သတ်လွတ်ထုတ်ကုန် vegan ထုတ်ကုန်အဖြစ်ကိုလောင်ခဲ့သည်။ ဒါပေးအပ်ကျနော်တို့ vegan tofu ကိုထုတ်လုပ်နေစဉ်မည်သည့်ကြက်ဥအဖြူပေါင်းထည့်မကျူးလွန်ခံကြရသည်။ ဒါကြောင့် tofu လုံးဝ vegan ဖြစ်ပါတယ်။ Vegan ဖောက်သည်တော့ဘူးအမှားဖြင့်မ ovo-သက်သတ်လွတ်စားသုံးကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲကရရှိခံစားနိုင်သည်။
အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနှင့်ထုတ်လုပ် Frozen Tofu။ ကျနော်တို့အနာဂတ်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာ, စီမံခန့်ခွဲမှု, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စီးပွားရေးအပေါ်တီထွင်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။